४ फाल्गुन २०७६ आइतबार
डाक्टर आउने समय भएकाले धेरै बेर बस्‍ने अवस्था थिएन । मैले सरसर्ती उनको कथा सुनेँ । मुस्कानलाई एकाबिहानै विद्यालय पुग्‍नुथ्‍याे । अरू दिन भाइ र उनलाई विद्यालयसम्म बुबाले पु‍र्‍याइदिन्थे । तर २० भदौ बिहान उनको साथमा बुबा थिएनन् । बुबा बिरामी परेकाले भाइको साथमा विद्यालय गइरहेकी थिइन्, मुस्कान ।
मलाई थाहा पाउनु थियो, मुस्कान समाजमा कसरी घुलमिल भइरहेकी छिन् ? दैनिकी कसरी चलिरहेको छ ? उनले मोबाइलमा आफ्नो पुरानो फोटो देखाइरहँदा बहिनी दिदीको एसिड लागेको हात हेरेर सुमसुमाउँदै थिइन् । उनलाई छरछिमेकीले पनि माया गर्दा रहेछन् । तेजाबले बनाएको घाउलाई घामबाट बचाउनुपर्दो रहेछ ।
उनमा कसरी आत्मबल भरियो त ? एक दिन एसिडविरोधी अभियानकर्मी उज्ज्वलविक्रम थापा उनलाई भेट्न गएछन् । भनेछन्, ‘तिमी कोठाभित्र लुकेर बस्यौ भने एसिड हान्‍नेहरूको जित हुन्छ । तिमी हार्छाै । उनीहरूलाई जित्‍नुछ भने आफैँसँग लड, लुकेर नबस ।’